Lahatsoratra nataon'i Bob Croft ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Bob Croft
Infographic: torolàlana amin'ny famahana ny olan'ny mailaka amin'ny famoahana ny mailaka
Zoma, Desambra 11, 2020 Zoma Janoary 22, 2021 Bob Croft
Rehefa mandefa mailaka ianao dia mety hiteraka korontana be. Zava-dehibe ny hahatongavana any amin'ny farany ambany - haingana! Ny zavatra voalohany tokony hatombontsika dia ny fahazoana ny fahalalana ny singa rehetra miditra amin'ny fampidirana ny mailakao amin'ny boaty… dia ao anatin'izany ny fahadiovan'ny data, ny lazan'ny IP, ny fikirakirana DNS (SPF sy DKIM), ny atiny ary izay rehetra mitory amin'ny mailakao toy ny spam. Ity misy infographic manome a
Talata, Desambra 8, 2020 Alarobia, Desambra 30, 2020 Bob Croft
Raha ny fandefasana mailaka sy ny fanaovana doka amin'ny marketing amin'ny mailaka dia zava-dehibe tokoa ny isa IP an'ny fikambanana anao, na ny lazany IP. Fantatra amin'ny isa mpandefa ihany koa, ny lazan'ny IP dia misy fiantraikany amin'ny fandefasana mailaka, ary izany no tena ilaina amin'ny fanentanana mailaka mahomby, ary koa ho an'ny fifandraisana betsaka kokoa. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia dinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny isa IP ary jerena ny fomba ahafahanao mitazona laza IP matanjaka. Inona ny isa IP
Ny sehatra automatisation marketing (MAP) dia rindrambaiko manodina ny hetsika marketing. Ireo sehatra dia manome fiasa mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny mailaka, ny media sosialy, ny gen gen, ny mailaka mivantana, ny fantsona fanaovana dokambarotra nomerika ary ny mpanelanelana amin'izy ireo. Ireo fitaovana dia manome tahiry marketing afovoany ho an'ny fampahalalana momba ny varotra ka ny fifandraisana dia azo kendrena amin'ny fampiasana fizarazarana sy personalization. Misy fiverenana lehibe eo amin'ny fampiasam-bola rehefa ampiharina tsara sy ampiasana tanteraka ireo sehatra fanaovana marketing automatique; na izany aza, orinasa maro no manao fahadisoana lehibe